Haddii 7-daan Calaamad Isku Aragtaan Jaceylkiina Daaqadda Ayuu Ka Sii Baxayaa Ee Ka Taxadara.SII DAAWO - iftineducation.com
iftineducation.com – Xariirka lamaane ee fashilka ku socda ayaa leh calamaado dhowr ah oo aan hal maqaal lagu soo koobi Karin
Goaano adag : haddii midkiina uu qaadanayo goaanno adag oo ku aadan maareynta qoyskiina oo uusan jirin wada tashi waxa ay xayaati.com ku leedahay xariirkiina nolosha jaceylka fashil ayuu ku dhaw yahay ee wax ka badala .
Is Badal Ku Yimid Rabitaankiisa Ku Aadan Sida Aad Tahy Adna Sidoo Kale : Midkiina kuma aqbalayo midka kale dhinacyo badan oo ku aadan shaqsiyadiisa , haddii arintaas si deg deg ah loo saxin mustaqbalkiina mugdi ayuu ku jiraa .
Ma Wada Gaartaan Xal Wada Jir Ah Marka Aad Mareysaan Xaalado Adag: haddii uusan jrin wax aad isku afgarataan oo xal u noqn kara culeysyada jira waxaad u nugushihiin fashil .
Dhag Jalaq Uma Siiyo Dalaabyadaada Adna Sidoo Kale : tanin waxa ay muujineysaa in bur burka qosykiisana uu diyaar yahay
Isku Dan Ma Tihiin : haddii maqane jooge kala tihiin oo aydan isku fikir aheyn waxna hal meel u wadin mustaqbalkiina mugdi ayuu sii galayaa ee iska xaliya .
Haddii uusan u aabo yeeleyn dalaaladaada adna sidoo kale ee ku aadan ka mira dhalinta guul laga gaaro noloshiina meeshaas wax ka soo socda malaha ee xayaati.com waxa ay idin leedahay ku dadaala in midkiina kan kale ku taageero dadaalada lagu hor marinayo qoyska .
Haddii ay adkaato in kalsooni is weydaarsadaan taasina ma fiicna waayo kalsoondia waa tiir ka mid ah tiirarka qoyska ku dhisan yahay , haddii wax adag ay noqoto abuuridda kalsoonida waxaad ogataa in aysan jireyn guul .
(DAAWO VIDEO) Sheekh Maxamed Idiris Oo ka Waramaya Xukunkii Maxkamada Maraykanka kasoo baxay…